Ukuba ndifaka idiski ye-SSD kwi-Mac, kufuneka ndiqwalasele i-TRIM? | Ndisuka mac
Ukuba ndifaka idiski ye-SSD kwi-Mac, kufuneka ndiqwalasele i-TRIM?
Ukuchaza ngendlela elula ukuba yintoni i-TRIM, siza kuthi kwiidiski ezindala okanye ii-SSD zokuqala ezize emarikeni kwaye ezinokufakwa kwiiMacs, bekuyimfuneko ukulinda ukuba "zilungelelaniswe" ngaphambi kokuqala gcina idatha kuzo, kuba bekufuneka zicociwe. Kwezi diski bekuyimfuneko ukwenza inyathelo ngaphambi kokuqala ukuzisebenzisa ukuze zingangxami ekusebenzeni, xa sisithi chu, sithetha ukuba sicotha kakhulu. Okwangoku oku akusafuneki kwaye akufuneki sisebenzise i-TRIM okoko iidiski zangoku sele zinama-algorithms kwisahlulelo sediski esenza oku kucoca kwimemori ukuze zisebenze ngokukhawuleza kwaye ngaphandle kwesidingo sokuchukumisa nantoni na.
Xa ndithethile oku, kufuneka kucaciswe ukuba ukuba senza i-TRIM ayibi kwi-Macs zethu kwaye sinokubona ukuba ayisebenzi kwikhompyuter yethu. Olu tshekisho lulula kwaye luyakhawuleza, kufuneka sicofe kwifayile Iapile logo> Malunga nale Mac> Ingxelo yenkqubo> Ukhetho lwe-SATA / SATA EXPRESS. Eli licandelo apho siza kufumana khona «Ukuhambelana ne-TRIM» EWE okanye HAYI. Ukuba idiski yethu isebenza kakuhle akuyomfuneko ukuyivula, kodwa ukuba sifuna ukuyivula kufuneka senze amanyathelo ambalwa.
Vula kwaye ucime i-TRIM
Into yokuqala ekufuneka siyenzile Isiphelo esivulekileyo kwaye wongeze lo myalelo siwushiya apha ngezantsi:
sudo trimforce vumela
Ngale ndlela, iTheminali iya kusicela ukuba sicinezele u-Y / N, ngezilumkiso ezininzi zokuba le nkqubo ingonakalisa idatha, njl. Ngokucacileyo kufuneka senze oku kusebenze kunye nediski engenanto yolwazi okanye ngaxeshanye lofakelo. Cinezela Y (Ewe) kwaye ukuba akukho mpazamo, qhubeka ukuqala kwakhona ikhompyuter kwangoko nangaphandle kokucela. Xa inkqubo yenziwe, sinokujonga kwakhona ukuba sine-TRIM esebenzayo kwinketho yeNgxelo yeNkqubo.
Ukukhubaza i-TRIM Inkqubo iyafana, kodwa soloko ukhumbula ukwenza ikopi yogcino lwediski okanye ubuncinci yogcino kuba kule nkqubo idatha ilahlekile.
Islim trimforce khubaza
Ngoku siza kuba nediski efanayo nasekuqaleni kodwa akukho nto yenzekayo ukuba olu khetho lusebenze, ke Kuyacetyiswa ukuba siyishiye isebenze ukuba sele siyenzile okanye iyasebenza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Tutorials » Ukuba ndifaka idiski ye-SSD kwi-Mac, kufuneka ndiqwalasele i-TRIM?
KwiMackBook Pro yam phakathi kowama-2012 okukhankanyiweyo "Ukuhambelana kwe-TRIM" akuveli kwingxelo yenkqubo Ewe okanye HAYI.
idrive yakho ayizukuba yi-SSD, oku kwenzelwe oku kuphela.
Molo, iMacbook Pro 13¨ phakathi kowama-2014 iye yaphambanisa i-SSD
Ngeli xesha ndithenge i-SSD entsha kwi-iFix, kodwa ndiyifakile kwaye ayiyiboni, kwaye andazi ukuba ndiyenze njani i-TRIM ndicinge ukuba andifakwanga i-OS.
Molo, kunyaka odlulileyo ndafaka i-Samsung SSD 2009 EVO 850GB ye-OS kwi-imac yam yokugqibela ka-250 (ndiyigcina i-HDD yedatha). Xa ndiyifakileyo bendingenalo nofifi malunga nenkxaso ye-TRIM, kwaye ndiqinisekisile ukuba ikhubazekile kwi-imac yam. Ndiyasiqonda isizathu sokuba uthi ngoku kungcono ukuba ungayichukumisi, okokuqala kuba akusafuneki kwaye okwesibini kuba inokuphulukana nolwazi kwi-SSD kwaye kufuneka iphinde ifake i-OS kwakhona ... ndiqonde ngokuchanekileyo?
Enkosi kakhulu kunye nemibuliso!
UOmar delgadillo sitsho
Ndafaka i-ssd ngokwenyani Clone i-HDD yam kwi-ssd entsha nayo yonke into ok
Kodwa ngaphambi kokwenza i-Clone Clim esebenzayo kwaye ndifuna ukwazi ukuba ndingayenza ngaphandle kokulahla ulwazi lwe-SSD?
Phendula uOmar Delgadillo
Iitemplate zeMaphepha angama-88 ukwenza ukuqhubeka kwakhona okugqibeleleyo
Iitemplate ezili-100 zasimahla zeLizwi likaMicrosoft zexesha elincinci